बजारमा सुधार अाउन माघसम्म कुर्नुपर्ने ! किन जाँदैछ बजारमा पहिराे ? निगरानी -
अहिलेको बजारको गिरावट आन्तरिक भन्दा बाह्य वातावरणीय प्रभावद्वारा निर्देशित छ ।
काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक संघीय संरचनाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएर देश स्थायित्वतर्फ अघि बढेको बतार्इँदै गर्दा बजारमा त्यसकाे सकारात्मक प्रभाव देखिएकाे छैन । निर्वाचनपछिको राजनीतिक समीकरणप्रति भिन्नाभिन्न विश्लेषकहरुको फरक फरक विश्लेषण भइरहँदा शेयर बजार भने यसलाई तटस्थ रुपमा स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ । निर्वाचनकाे परिणामले वाम गठवन्धनकाे पक्षमा सुविधाजनक बहुमतकाे अवस्ठा सिर्जना गरे पनि सम्भावित स्थायित्वको आशामा न त शेयरबजार उत्साहित भयो, न त कम्युनिष्ट सरकारको त्रासमा निरुत्साहित नै । त्यसैले बजारमा सामान्य उतारचढाव मात्र देखिएको हो ।
तर हाल आएर बजार निरन्तर रुपमा घट्न थालेको छ । आइतबार दोहोरो अंकमा घटेको शेयर बजार सोमबार स्थिर देखिए पनि मंगलबार पुनः अाइतबारकै अवस्थालार्इ पच्छ्याएकाे हो । यसलाई कतिपयले निर्वाचनपछि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधको कारण माने त्यो नै पर्याप्त कारण भने होइन । अहिलेको बजारको गिरावट राजनीतिक भन्दा वित्तीय कारणले नै भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
बजेट लगत्तैको बर्षायाम, त्यसपछिको चाडवाड र त्यसलगत्तै सुरु भएको चुनावी माहोलका कारण सरकारको विकास खर्च न्यून हुनु, निर्वाचनमा धेरै रकम खर्च भए पनि त्यसले सिञ्चित गर्ने तरलता बैंकिङ पहुँचसम्म आइपुग्न समय लाग्नु, पहिलो त्रैमासमा संकलित कर राजश्व ढुकुटीमा जम्मा भएर बस्नु, दोस्रो त्रैमासको राजश्व समेत संकलन हुन थाल्नु तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण औजारहरु मार्फत् अत्यधिक मात्रामा बजारबाट तरलता खिच्नाले बजारमा तरलता अभाव देखिएको र यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपबाट बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको विश्लेषकहरुको दाबी छ । हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएर बैंकहरुले आकर्षक ब्याजदरसहितको बचत स्कीम जारी गर्न थालिसकेका छन् ।
कहिले आउला सुधार ?
सामान्यतया दोस्रो त्रैमाससम्म सुचिकृत कम्पनीहरुको साधारणसभा भइसक्ने र लाभांशसम्बन्धी प्रस्ताव आइसक्ने भएकोले पुस महिनादेखि शेयर बजारमा त्यति उत्साह देखिँदैन । चैतपछि भने अधिकांश कम्पनीहरुको तीन त्रैमासको प्रगति विवरण प्राप्त भइसक्ने भएकोले नयाँ आर्थिक बर्षको प्रतिफलका लागि लगानीकर्ताहरु बजारमा आकर्षित हुन थाल्छन्, त्यसैले बाह्य वातावरणीय प्रभावलाई छाड्ने हो भने फागुन/चैतसम्म बजारमा उल्लेखनीय सुधार देखिँदैन । तर अहिलेको बजारको गिरावट आन्तरिक भन्दा बाह्य वातावरणीय प्रभावद्वारा निर्देशित छ । राजनीतिक गतिरोध, तरलताको अवस्था तथा सरकारी खर्चमा सुधार भएसँगै बजार सुधार हुन्छ तर त्यसका लागि एक महिनाजति समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
पुसभित्र राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएर नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना भएकोले राजनीतिक अन्यौलता समाधान हुने भएकोले त्यसले बजारलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्नेछ । त्यस्तै, बजेटको मध्यावधि समीक्षापछि सरकारी बजेटमा समायोजन भई सरकारी खर्चमा तीव्रता आउने र ग्रामीण क्षेत्रको तरलता शहरी वित्तीय क्षेत्रको पहुँचसम्म आइपुग्ने भएकोले त्यसपछि बजार बढ्ने अनुमान विश्लेषकहरुको छ ।
तर, माघपछि बजारमा तीव्र मूल्यवृद्धि समेत हुने खतरा समेत औल्याइएको छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच तादम्यता मिल्दा निर्वाचनको समयमा अत्यधिक खर्चका बाबजुत बजारमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण भएको थियो । तर अबको सरकारपछि सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको समन्वयमा कमी आउनसक्ने चुनावी खर्चकाे प्रभाव बजारमा देखिने सम्भावना भएकाेले जनता मूल्यवृद्धिकाे खतरा देखिन्छ जसले गर्दा जनताहरु वित्तीय अव्यवस्थाको मारमा भने पर्न सक्छन् ।
लाभांश घोषणासँगै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको शेयर काराेबारमा 'बुम', एकैदिन २७ करोड !
काठमाडौं । अघिल्लो बर्ष जारी गरेको थप सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त प्रिमियम रकम र अघिल्लो...